ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လူမှုရေးကိစ္စရပ်များအပေါ်ရပ်တည်သင့်သလဲ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 25, 2017 ကြာသပတေးနေ့, မေလ 25, 2017 Douglas Karr
ဒီနေ့မနက်မှာငါ Facebook ပေါ်မှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးသတင်းများသည်နိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်မှုများသို့တွန်းပို့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆိုးကျိုးကိုကျွန်ုပ်မမြင်လိုတော့ပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာနိုင်ငံရေးအမြင်တွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေမျှခဲ့တယ်။ အရမ်း။ ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်များသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သဘောတူသောလူများပိုမိုပြောင်းလဲလာသည်ကိုကျွန်ုပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။
ငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းမှရှောင်ထွက်ရန်ငါကြိုးစားနေသည့်ကုမ္ပဏီများကိုမြင်တွေ့ရစဉ်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များကကျွန်ုပ်နှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေခဲ့သည်။ ဤအရာကိုသိခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေးနှင့်မဟာဗျူဟာကိုပြောင်းလဲလိုက်ကြောင်းသိရသောအခါသင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်ထုတ်ဝေသောလူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအများစုသည်ယခုအခါတွင်လူမှုရေးအရရော၊ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီအကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်
ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်မှုများသည်ကျွန်ုပ် ၀ န်ထမ်းများအားမည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုမထိခိုက်ပါ။
သူတို့ကိုပေါင်းကူးပေးမည့်အစားကွာဟချက်များကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေခြင်း မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှဖြေရှင်းခြင်းမရှိပါ။
လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ လေးစားမှုမရှိသောသဘောထားကွဲလွဲမှုများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကွယ်ပျောက်သွားသည်။ ယခုအခါကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုများဖြင့်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခံရပြီးမည်သည့်ရပ်တည်ချက်ကိုမဆိုအများပြည်သူသိမြင်လျှင်ပင်သပိတ်မှောက်သည်။ မည်သည့်ကာကွယ်ရေးသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှုများကိုမဆိုလုံးဝမီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအမည်ဖြင့်ခေါ်ခြင်းသို့လျင်မြန်စွာနစ်မြုပ်သွားသည်။ ဒါပေမယ့်ငါမှားလား ဤအချက်အလက်များသည်စားသုံးသူအများစုကသဘောမတူကြောင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်စစ်မှန်ပြီးလူမှုရေးပြissuesနာများကိုလူသိရှင်ကြားပြုလုပ်သင့်သည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းပြသသည်။
Havas Paris / Paris Retail Week Shopper Observer သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပြင်သစ်သုံးစွဲသူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြောင်းလဲစေသည့်လမ်းကြောင်းသုံးခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
စားသုံးသူများကယခု၎င်းသည်ယခုအခါဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည် အမှတ်တံဆိပ်၏တာဝန် လူမှုရေးကိစ္စရပ်များတွင်ရပ်တည်ချက်ယူရန်။
စားသုံးသူဖြစ်ချင်တယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆုလာဘ် သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
စားသုံးသူနှစ် ဦး စလုံးရရှိနိုင်ပါသည်ထုတ်ကုန်တောင်းဆိုနေကြသည် အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်း.
ငါ ၅၅ နှစ်နီးပြီဆိုတော့ငါ့အမြင်ကကွဲပြားနိုင်တယ်။ လူမှုရေးပြissueနာအားလုံးနီးပါးသည်နိုင်ငံရေးဘောလုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သော်လည်းသုံးစွဲသူများ၏သုံးပုံတစ်ပုံသာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်နိုင်ငံရေးကိုရယူလိုကြသည့်အချက်အလက်များတွင်ပြaနာရှိနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါလူမှုရေးကိစ္စရပ်များအပေါ်၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ် patronize ချင်မသေချာဘူး။ စားသုံးသူအခြေခံကိုကွဲစေသောအငြင်းပွားဖွယ်လူမှုရေးရပ်တည်ချက်ကော။ ငါပထမ ဦး ဆုံးကြေညာချက်ပြန်လည်ရေးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်ထင်ပါတယ်:
စားသုံးသူများကယုံကြည်သည်မှာယခုကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏တာ ၀ န်သည်လူမှုရေးကိစ္စများကိုရပ်တည်ရန်ဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ရပ်တည်ချက်သည်စားသုံးသူနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်အောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသဘောတူနေသမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်သည်။
လူမှုရေးပြissuesနာများကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်သောမည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်မှကျွန်ုပ်တွင်ပြnoနာမရှိပါ။ သို့သော်အမှတ်တံဆိပ်များရပ်တည်ရန်ဖိအားပေးမှုသည်သူတို့၏အမြင်များအားစီးပွားရေးအရအပြစ်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အပြစ်ပေးခြင်းများအတွက်အသုံးပြုမလားကျွန်ုပ်မစဉ်းစားနိုင်ပါ။ လူမှုရေးပြissuesနာအများစုသည်အကြောင်းအရာမဟုတ်၊ ဒါကငါ့အတွက်တိုးတက်မှုလို့မထင်ဘူး - အနိုင်ကျင့်တာနဲ့တူတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုသဘောတူသူများကိုငှားရမ်းရန်နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်တူညီသည်ဟုထင်မြင်သူများသာအစေခံရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခြင်းကိုမခံလိုပါ။
ငါအုပ်စု - ထင်ထက်အမြင်များ၏မတူကွဲပြားတန်ဖိုးထားတယ်။ အလားအလာများ၊ ဖောက်သည်များနှင့်စားသုံးသူများသည်အလိုအလျောက်မဟုတ်ဘဲလူသား၏ထိတွေ့မှုကိုလိုချင်ဆဲဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သူတို့ကြိုးစားအားထုတ်ထားသောဒေါ်လာများကိုကုန်ဆုံးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များက၎င်းတို့အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရချင်သည်။
Shopper Observer လေ့လာမှု၊ AI နှင့်နိုင်ငံရေးအကြားတွင်စားသုံးသူများအတွက်လူ့အချက်၏အရေးပါမှုHavas Paris နှင့် ပူးပေါင်း၍ Paris Retail Week မှပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Tags: အမှတ်တံဆိပ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်Havas Parisအော့ဖ်လိုင်းရောင်းအားပဲရစ်လက်လီအပတ်ဝယ်ဈေးဝယ်သူနိုင်ငံရေးလက်လီအရောင်းဆိုင်များလက်လီအရောင်းဆိုင်များလက်လီရောင်းချသူများဆုလာဘ်လူမှုရေးပြissuesနာများလူမှုရေးရပ်တည်ချက်
Omnichannel စားသုံးသူ ၀ ယ်သည့်အပြုအမူ၏လျှပ်တစ်ပြက်ဓာတ်ပုံ
မေလ 25, 2017 မှာ 2: 08 pm တွင်
ထုံးစံအတိုင်း။ ကောင်းသောအချက်များ။ စားသုံးသူလိုချင်သောအရာအားသင်၏ပြုပြင်ထားသောဖော်ပြချက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ အနည်းဆုံးတော့သူတို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်အတွက်လူသိရှင်ကြားအပြစ်ပေးခံရလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒေါ်လာကသူတို့ကိုသီးသန့်သဘောတူတဲ့ထပ်တိုးဖောက်သည်တွေကတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်။
မေလ 30, 2017 မှာ 12: 09 pm တွင်
သင်၏လူမှုရေးပြissuesနာအများစုသည်ပုဂ္ဂလဓိare္ဌာန်ကျကျမဟုတ်ဘဲဓမ္မဓိnot္ဌာန်ကျကျမဟုတ်ဘဲ၊ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်ကိုစုစည်းထားသောသင်၏ဆောင်းပါးမှအဓိကဖော်ပြချက်နှစ်ခုနှင့်“ အုပ်စုလိုက်စဉ်းစားခြင်းထက်အမြင်များ၏မတူကွဲပြားမှုကိုငါတန်ဖိုးထားသည်” ငါထင်တာကတော့ဒီပိုလာရုစ်ဝါဒသမားအများစုဟာသူတို့ထင်မြင်ယူဆချက်ဟာထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်တယ်၊ သူတို့ထင်မြင်ချက်ကိုသူတို့နားမလည်နိုင်ဘူး၊ နားမလည်နိုင်ကြဘူး။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှဤပြissuesနာများအပေါ်သူတို့၏ရပ်တည်ချက်ကိုလူသိရှင်ကြားမထုတ်ပြန်သင့်ကြောင်းလုံးဝသဘောတူသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ကွဲပြားသောအမြင်များ၊ ရပ်တည်ချက်များရှိ ၀ န်ထမ်းများရှိသည်ဟုပြောမည်ဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်စွာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ရှိ ၀ န်ထမ်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းတို့အတွက်ရပ်တည်နေသည်။